Malunga nathi -I-Guangdong Donghua Optoelectronics Technology Co, Ltd.
I-Guangdong Donghua Optoelectronics Technology Co, Ltd. (DHUA) eyayibizwa ngokuba yi-Dongguan Fenghua Acrylic & Mirror Craft CO., Ltd, ngumvelisi wesipili kunye nomnikezeli kwikomkhulu laseDongguan, China. Ifunyenwe ngo-2000, i-DHUA izimisele ekuboneleleni nge-acrylic sheet ekumgangatho ophezulu, kunye nesipili sesipili, njengesipili se-acrylic, isipili se-polystyrene, isipili se-polycarbonate, isibuko se-PETG, isipili esichasene nenkungu, ezimbini zesipili, isibuko se-convex, i-convex / concave lens kunye nesipili seFresnel kunye nokusika kubungakanani beenkonzo.
Ngobuchwephesha bokuvelisa obuphambili kunye namancedo, i-DHUA ibonelela ngeenkonzo zobungcali kunye ne-One-Stop kubathengi ngokugqibezela yonke inkqubo yemveliso yokwenza iphepha elicacileyo, ukucoca i-vacuum, ukusika, ukubumba, ukwenza i-thermo. Ngokukhula kakuhle kolu shishino, i-DHUA ngoku iba ngumenzi wemigangatho yeemveliso zamashiti e-acrylic (PMMA) e China ngemigudu yethu engaphezulu kweminyaka engama-20.
Ezi sheet zesipili zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo anje ngento yokudlala, ifanitshala, intengiso / indawo yokuthenga, umboniso wevenkile, imiqondiso, ukhuseleko, izithambiso kunye nezithuthi.
Umgangatho okhokelela kumenzi e China
Imigca yokuvelisa ngokuzenzekelayo yanamhlanje
Iziphumo zomndilili wemihla ngemihla
I-DHUA iyaqonda ukuba umthengi onelisekileyo ubalulekile kwimpilo yethu, ukuchuma kwethu kunye nokukwazi kwethu ukukhula. Njengombutho obhalisiweyo we-ISO-9001 kunye neShishini leTekhnoloji ePhakamileyo, elungiselela iimfuno zabathengi bethu ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nokugqwesa kwenkonzo sisiseko senkcubeko yeenkonzo zethu zokuvelisa, le ngxelo iya kumelwa kuwo wonke umsebenzi owenziwa ngabasebenzi be-DHUA.
Umsebenzi ngamnye we-DHUA unoxanduva lomgangatho kunye nexesha elifanelekileyo kwiimveliso zethu. Zonke iimveliso zethu ziqinisekisiwe kumazwe aphesheya, ezinje ngeRohs, EN-71, ASTM, REACH kunye ne-SGS.
Ifilosofi yethu esemgangathweni yaqala ngo-2000 kwaye isizisela igama elihle. Namhlanje uDonghua yinkokeli esemgangathweni, eqeshe abasebenzi abangaphezu kwama-300 kunye nokusebenzela abathengi behlabathi kumazwe angaphezu kwama-80. Simisele ubambiswano lwexesha elide kunye neenkampani ezininzi ezinamandla ezinjengeNVC, iLi & Fung, iHasbro, iSony, iMcdonald's, iMatel, i-Estee Laudder, iDior, iGree, iGe Lanshi kunye neMidea ect.
Iqela lethu liqela lakho. Simanyene ekwenzeni konke okusemandleni ethu ukukukhonza kunye neqela lethu lobungcali elenziwe ngamalungu azimiseleyo, azinikeleyo kwaye anetalente.